ဆူလ်ဂီ - ဝီကီပီးဒီးယား
(စွန့်ကိ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Marie Claire Pop Quiz မှ ဆူလ်ဂီ
(1994-02-20) ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၉၄ (အသက် ၂၈)
Red Velvet, Red Velvet - Irene & Seulgi, GOT the beat
ဆူလ်ဂီ (အင်္ဂလိပ်: Seulgi, ကိုရီးယား: 강슬기) (၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့ဖွား) သည် SM Entertainment အောက်မှ တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးကေပေါ့ပ်ဂီတအဖွဲ့ Red Velvet ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် Red Velvet ၏ ယူနစ်အဖွဲ့ခွဲ Red Velvet - Irene & Seulgi နှင့် SM Entertainment မှ ကေပေါ့ပ် အမျိုးသမီးအဆိုတော် များစွာပါဝင်သည့် GOT the beat အဖွဲ့တို့တွင်လည်း ပါဝင်ထားသည်။
၁.၁ ၁၉၉၄–၂၀၁၄: ငယ်ဘဝနှင့် အနုပညာခရီးအစ
၁.၂ ၂၀၁၅–ယခုအထိ: တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အဖွဲ့ခွဲများ
၁၉၉၄–၂၀၁၄: ငယ်ဘဝနှင့် အနုပညာခရီးအစ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂင်မ်ဆူလ်ဂီကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ အန်စမ်း၊ ဂယောင်းဂီဒို၌ မွေးဖွားခဲ့သည်ပြီး မွေးချင်းအစ်ကိုကြီးတစ်ဦးရှိသည်။ သူမသည် အန်စမ်းဘျောမန် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ဆိုးလ်မြို့ရှိ School of Performing Arts ကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်စကား နှစ်မျိုးလုံး ပြောဆိုနိုင်သည်။
ဆူလ်ဂီသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် SM Entertainment သို့ သင်တန်းသားအနေဖြင့် ဝင်ရောက်ကာ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်လာရန် စတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် SM Entertainment ၏ ပွဲဦးထွက်အကြိုပရောဂျက်ဖြစ်သောSM Rookies မှတဆင့် လူသိရှင်ကြားမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် ပထမဆုံးသော သင်တန်းသား (၃) ဦးအနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဆူလ်ဂီသည် Red Velvet အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တရားဝင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅–ယခုအထိ: တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အဖွဲ့ခွဲများ[ပြင်ဆင်ရန်]
အခြားကြည့်ရန်။ Red Velvet
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် SM Entertainment မှ တင်ဆက်သည့် School Oz ပြဇာတ်တွင် ဇာတ်ဆောင် Dorothy အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဆူလ်ဂီသည် King of Mask Singer ရုပ်သံအစီအစဉ်တွင် Cinema Heaven ဟုခေါ်သော ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သူမသည် (G)I-dle အဖွဲ့၏ ဆိုယွန်း၊ GFriend အဖွဲ့၏ SinB၊ တစ်ကိုယ်တော်အဆိုတော် Chungha တို့နှင့်အတူ မီနီအဖွဲ့ငယ်ဖြစ်သည့် Station Young အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး "Wow Thing" သီချင်း ထွက်ရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၅ရက်နေ့တွင် ဆူလ်ဂီသည် Gaon Digital Chart တွင် နံပါတ် ၂ နေရာအထိ ရောက်ရှိခဲ့သော တောင်ကိုရီးယား ဟစ်ဟော့နှင့် R&B အနုပညာရှင် Zion.T ၏ သီချင်း "Hello Tutorial" တွင် Featuring အဆိုတော်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဆိုးလ်မြို့၌ ကျင်းပြသည့် La Rouge ဖျော်ဖြေပွဲအတွင်း ဆူလ်ဂီသည် ၎င်း၏ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည့် "Uncover" သီချင်းကို ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် SM Entertainment မှ ဆူလ်ဂီသည် Red Velvet အဖွဲ့ဝင်အဖော် အိုင်းရင်း နှင့်အတူ Red Velvet ၏ ပထမဆုံး ယူနစ်အဖွဲ့ခွဲအဖြစ် ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ ယူနစ်အဖွဲ့ခွဲ Red Velvet - Irene & Seulgi သည် Monster EP ဖြင့် ဇူလိုင်လ ၆ရက်နေ့တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း EP တွင် Seulgi ၏ တစ်ကိုယ်တော်သီချင်း "Uncover" ၏ စတူဒီယိုဗားရှင်း အပြည့်အစုံပါရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် သူမသည် Naver Now ၌ သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ် Seulgi.zip ကိုစတင်ပြသခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဆူလ်ဂီသည် Red Velvet အဖွဲ့ဝင်အဖော် ဝင်ဒီ နှင့်အတူ SM Entertainment ၏ အမျိုးသမီးအဆိုတော် များစွာပါဝင်သည့် စူပါအဖွဲ့ Got the Beat ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂ရက်နေ့တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။
↑ Jini (July 30, 2014). "레드벨벳 슬기·아이린·웬디·조이…플룻부터 섹소폰까지 "다재다능"". E Today (in Korean).
↑ Lim Jeong-yeo (January 8, 2015). "TVXQ, SHINee, EXO, f(x) to star in hologram musical 'School OZ'". The Kpop Herald.
↑ Sun Mi-kyung (October 3, 2016). "[Oh!쎈 톡] 레드벨벳 슬기 "'복면가왕' 출연 고심, 날 성장시킬 기회"". Osen (in Korean).
↑ Tamar Herman (September 28, 2018). "Red Velvet's Seulgi, GFriend's SinB, (G)I-dle's Soyeon & Chung Ha Team for 'Wow Thing'". Billboard.
↑ Kim Myung-mi (July 23, 2020). "레드벨벳 아이린&슬기, 오늘(23일) 스페셜 비디오 마지막편 공개". Newsen (ကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်).
↑ Lee Min-ji (April 21, 2020). "SM 측 "레드벨벳 아이린X슬기 유닛 준비 중"(공식입장)". Newsen (ကိုရီးယားဘာသာစကားဖြင့်)
↑ Lee Tae-soo (December 27, 2021). "보아·태연·카리나 등 뭉쳤다…SM 여성 유닛 '갓 더 비트' 출범" [BoA, Taeyeon, Karina, etc. have teamed up...SM female unit 'God the Beat' launched] (in Korean). Yonhap News Agency.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆူလ်ဂီ&oldid=735927" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၇:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။